Madaxweynaha JSL Mud Daahir Rayaale ayaa qasriga Madaxtooyada ku qaabilay Wufuud ka socota Shirkadaha Patroolka Baadha ee dalka Norway | WWW.SOMALILAND.NO
Hargaysa:-Madaxweynaha JSL Mudane Daahir Rayaale Kaahin waxa uu qasriga Madaxtooyada ku qaabilay Wufuud ka socota Shirkadaha Patroolka Paadha ee dalka Norway oo booqasho ku jooga Jamhuuriyadda Somaliland.
Wefdigaasi waxa ka mid ahaa Shirkadd ka tirsan dalka Norway oo beryahanba ku hawlanayd baadhista dhulka ay ku jiraan Khayraadka dabiiciga ah ee Jamhuuriyadda Somaliland , kuwaasi oo ay ugu horeyso Sayliida iyo Gaasta oo ay bad iyo Barriba si cilmiyaysan ay ugu kuur galayso kana baadhayso dhinaca hawada meelaha loo malaynayo in Saliida iyo Gaastu ku jirto dhulka Somaliland.
Madaxweynuhu waxa uu wefdiga uga mahad naqay hawlihii ay tan iyo imika ka soo qabteen Somaliland oo meel fiican maraya.
Shirkadaasi Norwegian-ka ah ee ku shaqada leh baadhista khayraadka dabiiciga ah waxa la filayaa in ay dhawaan soo saari doonto warbixino ku saabsan xogta ay ka gaadheen Baadhistooda.
Waxa kale oo ka mid ahaa Wefdigaasi Norwegian-ka ah ee uu Madaxweynuhu qaabilay Saaka Khubaro ka tirsan Shirkadaha Saliida Baadha ee dalka Norway oo xidhiidh la leh Shirkadaha waaweyn ee Saliida iyo Gaasta ee wadankooda , kuwaasi oo la filayo in ay iyana si dhakhso ah uga hawl geli doonaan Somaliland marka ay hawlaha ay qaban doonaan ka heshiiyaan iyaga iyo Wasaarada Macdanta iyo Biyaha Somaliland .
Madaxweynaha JSL Mudane Daahir Rayaale Kaahin waxa uu isla Saaka Qaabilay Wefdi ka socda Hay’adda Loo Yaqaano ‘’SOS‘’ oo Mashaariic dhawr ah ka hir galisay gobollo iyo degmooyin ka tirsan Somaliland oo ay ka mid yihiin Magaalada Sheekh , Burco iyo Magaalada Hargeysa , kuwaasi oo u badan dugsiyo wax lagu barto iyo xarumo caafimaad oo dadka danyarta ah laga taakuleeyo .
Waxa kale oo ay si dhakhso ah u bilaabi doonaan Mashaariic kuwaa la mid ah oo ay ka hir gelin doonaan Boorame .
Madaxweynuhu waxa uu si weyn ugu mahad naqay hawsha wax ku oolka ah ee hay’adda SOS ay a hir galisay Jamhuuriyadda Somaliland , kuwaasi ay ugu weyn tahay Mashaariicda Waxbarashada iyo Caafimaadka.
Waxa kale oo uu Madaxweynuhu ka Codsaday hay’adda SOS in ay dib u bilowdo Dhismihii iyo taabo gelinta dugsigii Farsamada Gacanta ee ku ooli jiray Magaalada Burco, kaasi oo si weyn ay uga faa’iidaysan doonaan Dhalinyarada reer Somaliland marka ay ka qalin jabiyaan dugsigaasi , fursad weyna u heli doona shaqooyinka uu u baahan yahay dalkeenu .
« Intaan ka xasuusto nabadayntii Ceerigaabo iyo beelaha Somaliland-Maxamed Siciid Gees. Macalimiinta Burco oo Loo Xidhay Waxbarasho Ku Saabsan Barashada Raadiyaha »